Download Adobe Photoshop Creative Cloud Edition 32+64 Bit + Activation Crack + Direct Link [1.3GB] - အမျိုးကောင်းသား
Home » software » Download Adobe Photoshop Creative Cloud Edition 32+64 Bit + Activation Crack + Direct Link [1.3GB]
Download Adobe Photoshop Creative Cloud Edition 32+64 Bit + Activation Crack + Direct Link [1.3GB]
Photoshop ကိုကို မမ တို့ အတွက် Adobe Photoshop Creative Cloud Edition လာပါပြီခဗျာ.. 32bit ရော 64 bit ရော အတွက် ပါ.. Zip ဖိုင်ထဲမှာ Crack Activate လုပ်နည်း ပါထည့်ပေးထားပါတယ်...
Adobe Photoshop Creative Cloud Edition မှာ 3D Editing Tools, Image Analysis Tools တွေပါ ပိုမို့ ပါဝင်လာပါတယ်... Download ပြုလုပ်ချင်သော သူများ အတွက် Direct Download Link ပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်...
So much is new in Photoshop CC. Generator automates the process of slicing and exporting image assets. Use all-new Smart Sharpen to make details stand out. Get all the 3D editing and image analysis tools that were previously available only in Photoshop Extended. And more.
[Download Link သေ ၊ မသေ သိရန် အောက်က ပုံ ကို Click ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ New Tap ဖွင့်သွား ပြီး Webpage အသစ် ပေါ်လာရမည်။ အကယ်လို့ webpage မပွင့်လျှင် File Not Found ဖြစ်သွား တဲ့ အတွက် အခြား Mirror ကနေ ဒေါင်းပါ။ New Tap ပွင့်တယ်ဆိုရင် တော့ ပေါ်နေတဲ့ Webpage ကို ပိတ်ပစ်ပြီး Download Now Button ကို နှိပ်ပြီး အောက်မှ ပေါ်လာသော Table မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Download Links များမှ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်]
Really thanks to Script Developer - Ko Thi Ha
Link, OK Or Dead ?
Share4MM Download Not Uploaded
Davvas Download Click Picture To Know
FileDap Download Click Picture To Know
BillionUpload Download Click Picture To Know
Direct Download Download Direct Ok Until 2013/11/19
[Download Link ကို နှိပ်ကြည့်၍ Download Link ကျ မလာလျှင် Right Click ဖြင့် Open In New Tap ဖွင့်ကာ Download ပြုလုပ်ဖို့ မမေ့ရန် သတိပေးအပ်ပါသည်။ Download ပြုလုပ်နည်း မသိပါက
Davvas File Host မှ Download ပြုလုပ်နည်း ၊ FileDap File Host မှ Download ပြုလုပ်နည်း များ သွားရောက်ဖတ်ရှုထားစေချင်ပါတယ်။ Download လုပ်တတ်သွားလျှင် ယခုဒေါင်း ယခုရသော်လည်း မဒေါင်းဖူးလျှင် နောက်တစ်ခါ Download ပြုလုပ်ချင်စိတ်ကုန်သွားနိုင်ပါတယ်။
Free လဲရ၊Download Speed လဲကောင်း၊ Size အကြီးကြီးများကို အတင်ခံသည့် File Host Provider များမှာ အလွန်ရှားသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ တင်ပေးသော File Host များမှ Download ပြုလုပ်နည်းများ သိထားသင့်ပါတယ်။]
Unplug or disconnect your internet connection
Run Set-up.exe in the adobe cc folder and follow the instructions (run as admin)
1. Choose TRY install. Click on "Sign in" and "Sign in Later"
2. Select your language. (You can not change it after installation)
3. Open the application as trial (select "Sign in Later" again) and select
"Continue trial" and close.
(IMPORTANT : If you miss this step it may not be registered)
Copy the amtlib.dll from crack folder to:
C:\_Program Files\_Adobe\_Adobe Photoshop CC (64 Bit)\_
for 32-Bit Systems (& 64-Bit):
Replace Existing File(s)
Reconnect internet and now you are finished !!
<<How To Download>>
ပြန်လည်တင်ပြသူ Steel Jelly အချိန် 10:14:00 PM